Dhowr ka mid ah qeexitaanka Meizu 16s Pro ayaa la dusiyay Androidsis
Dhowr ka mid ah qeexitaanka Meizu 16s Pro ayaa la dusiyay
Nooc ballaaran oo taleefannada casriga ah ah maahan waxa Meizu haysto. Si kastaba ha noqotee, soosaarahan Shiinaha ah looma ogaanayo inuu yahay mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee aan ka heli karno suuqa, illaa iyo inta laga hadlayo taleefannada gacanta. Xaqiiqdii, boosteejooyinkeeda ayaa istaagay dhowr sano oo ah qalab aad u fiican, labadaba qaybta bilicsanaanta - arrin soo fiicnaaneysay sannadihii la soo dhaafay - iyo qeexitaannada farsamo.
Taxanaha Meizu 16 wuxuu ka mid ahaa kuwii ugu cajiibka badnaa ee ay shirkaddu soo bandhigto. Si kastaba ha noqotee, waxaa xoogaa hadheeyay qalabka calanka ee shirkadaha sida Samsung, Huawei, Xiaomi iyo kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, waxay damacsan tahay inay duulimaad cusub sameyso si ay sambabbada u siiso tartamayaasheeda, tanina waxay damacsan tahay inay ku sameyso tan xigta Meizu 16s Pro, heer sare ah Waxaan hadda ka hadleynaa sababta oo ah dukumiinti dhowr dabeecadeed iyo astaamo farsamo lagu caddeeyay.
Shaashadda shaashadda ee dokumentiga aan hoos ku dhejineynay waxaa lagu sii daayay bogga Weibo microblogging. Tani, in ka badan dukumiinti, waa liis iyo faahfaahin taas Meizu 16s Pro ayaa la socda Snapdragon 855 Plus, madal ciyaaraha horey loogu soo kordhiyay qalabkan waqtiyadii hore taasna waxay ku raacsan tahay tilmaamaha soo jeedinaya inay noqon doonto terminal diirada saaraya ciyaaraha.
Meizu 16s Pro ayaa xaday qeexitaanno farsamo
Liistadu sidoo kale waxay muujineysaa - ama xaqiijineysaa - halkii, taas wuxuu la imaan doonaa 6 iyo 8 GB oo RAM ah. Xogtaan ma fileyno in noocyada kala duwan ee ROM ay ka hooseeyaan 128 GB iyo 256 GB, siday u kala horreeyaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jiri kara nooc leh 12 GB oo RAM ah.
Calanka ayaa sidoo kale la filayaa inuu ku soo bilowdo Duulaya 8, laakiin daadinta waxay muujineysaa inay adeegsan doonto Flyme 7.8, iyo sidoo kale matoorka OneMind 3.5 ee howlaha Sirdoonka Artificial iyo inbadan. Waxaan sidoo kale ognahay taariikhda rasmiga ah ee sii deynta ee Meizu 16s Pro, oo ah Ogosto 28, laakiin tan waa wax dhowr maalmood ka hor la shaaciyey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Dhowr ka mid ah qeexitaanka Meizu 16s Pro ayaa la dusiyay
Facebook waxay dhageysatay maqalka aad ku soo dirto Messenger
OPPO si ay u bilawdo taleefankeeda shaashadda ka hooseeya shaashadda sannadka 2020